Isimo eU.SSR ngokusemthethweni yayikhona esikhathini kusuka 30 December 1922 kuya ku-8 Disemba 1991, lapho emazweni ayengaphansi kweSoviet Union, baqala umgudu esizimele ukuthuthukiswa. Eqinisweni, abanye-ke sasinzima kakhulu.
Njengengxenye isimo kwaba republic angu-15. Kumiswa ezindaweni Union kwenzeka kancane kancane. Ngokugcwele imingcele yase-USSR, obabukhona ngesikhathi nokwahlukana isimo, kwakheka ngo-1940, lapho iSoviet ithatha amandla ombuso e ezweni entshonalanga ye-Ukraine. Bhala amagama ama-republic: Ukraine (inhlokodolobha - Kiev), eRussia (eMoscow), Belarus (Minsk), Lithuania (Vilnius), Latvia (Riga), Estonia (Tallinn), Kazakhstan (Astana), Armenia (Yerevan), Azerbaijan (Baku) Georgia (Tbilisi), Turkmenistan (Ashgabat), Kyrgyzstan (Bishkek), Tajikistan (Dushanbe), Uzbekistan (Tashkent), Moldova (Chisinau).
Isikhundla ezindawo ka
Amashumi ezinkulungwane amakhilomitha - konke kube komkhathi enkulu isimo, eyathatha iminyaka engaphezu kuka-70. Isimo sezulu republic ezahlukene kakhulu. Emazweni aseBaltic asezindaweni iviyo esipholile ezinomswakama sezulu. Ukraine futhi. Ehlobo, izinga lokushisa isilinganiso zokhahlamba kusuka +25 ... + 27 degrees, ebusika cishe 5 ngaphansi kwezingaqhwa. Uma uthatha ezweni elaliyiSoviet Union, le Lesi sifo siphatha kakhulu ukuba imikhuhlane Russia, noma kunalokho eSiberia, e-Arctic esenyakatho yezwe. Esikhathini eningizimu (ezifana e Krasnodar esifundeni) izinga lokushisa ebusika nehlobo kodwa futhi kakhulu kunaleyo ezindaweni enyakatho. Isimo sezulu on sipho ingxenye enkulu Insimu yezwekazi Russian.
Ngo-ntshonalanga yeSoviet Union-ke ingenye republic kencanikhulu - Moldova. amazwe Southern, amazwe ayengaphansi kweSoviet, okuyinto ngokwendawo elise ngale eCaucasus izintaba - kuba Armenia, Georgia ne-Azerbaijan. Zihlala sengathi, kodwa ngesikhathi esifanayo ngqo okungafani nomunye abantu. Ngo -Asia Ephakathi kukhona amazwe ayengaphansi kweSoviet Union, ezifana Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan futhi Turkmenistan. Owandile lapha ezomile futhi ezishisayo.
Ukuthuthukiswa ezifundeni zase-USSR Ngemva kokuwa Union
Qonda umbiko ibalazwe geopolitical, sibona amaqembu amaningana kwakhiwa. ISoviet Union yakuqala namuhla babe orientation ezahlukene zezombusazwe. Indawo ehamba phambili kuhlala Customs Union, okubandakanya eRussia, eKazakhstan kanye Belarus. Sekuyisikhathi eside amazwe aseBaltic (eLithuania, eLatvia nase-Estonia) wajoyina i-European Union kanye NATO. Muva nje, nezifiso eqinile European Ukraine futhi Georgia. Azerbaijan uzama ukugcina ngaphandle, ngoba uvale emazweni kusuka kwezinye izifunda, ezifana Turkey. Armenia uselokhu njalo abathathi hlangothi, kodwa kancane kancane unqabile a resumption of ngokubambisana neNhlangano Russia. Turkmenistan namuhla ikakhulukazi abakhuthele ukuphila kwawo ngokuqondene nezombusazwe ngamazwe alibonisi. Kwezomnotho, leli lizwe ocebile kakhulu ngezithukuthuku imithombo yemvelo ngokungadingekile. Tajikistan futhi Kyrgyzstan zisengozini angunaphakade, ngakho ezingeni yentuthuko yabo siphansi kakhulu.
On umnotho ezingeni republic eSoviet namuhla njengoba ezinsukwini Union nemikhuba yazo ihluke kakhulu. Ngokungangabazeki, emazweni amaningi athuthukile - Russia, Belarus, Ukraine, emazweni aseBaltic kanye, asanda, Georgia. Kude emuva emazweni oshiwo ngenhla-Asia Ephakathi.
Sporting impumelelo republic ngabanye
Singakhuluma mayelana eziningi, kodwa sizogxila football. Isenzakalo esidume kunazo zonke football club we Union "Spartak" (eMoscow) kanye "Dynamo" (Kiev), "Dynamo" (Tbilisi), "Dynamo" (eMoscow). It uSpartacus futhi izakhamuzi kuze kube sekugcineni abaholi inani ukunqoba ubuqhawe kazwelonke.
Namuhla, amaqembu kusukela ingxenye European zaseSoviet Union ngaphandle kokuphazanyiswa iqhaza ezwekazini imincintiswano club. Phakathi neminyaka engu-wokuzibusa weRiphabhulikhi kuzuza impumelelo enkulu of CSKA (eMoscow), "Zenit" (Petersburg) kanye "Shakhtar" (IDonetsk) - ngokuwina UEFA Cup, "Dynamo" (Kiev) - kowandulela owamanqamu we UEFA Champions League.
Ethangini olusindayo emhlabeni ayakhelwe eRussia. Futhi kahle ...
UWinston Churchill (Mnumzane Winston Leonard Spencer-Churchill). Biography, izithombe, amaqiniso athakazelisayo
Njengo-Aztec wahlala? Zithengiswe, kuyimisebenzi eyinhloko Aztec
Indlela yokukhalipha imimese ekhishini?
Yan Lebedev, indodana Gypsy Baron: A Biography. Isigwebo-Jan Lebedev